वाचोस 4.2.2.२ र टिभीओएस १०.२ | को लागि नयाँ विकासकर्ता बिटा म म्याकबाट हुँ
वाचOSOS 4.2.2.२.२ र टिभीओएस ११.२.। को लागि नयाँ विकासकर्ता बिटा
हिजो दिउँसोको समयमा एप्पलले बीटा संस्करण रिलिज गर्यो watchOS 4.2.2.२.२ र TVOS ११.२. develop विकासकर्ताहरूको लागि। यी नयाँ बीटा संस्करणहरूमा विशिष्ट बग फिक्सहरू र विकासकर्ताहरूको लागि अघिल्लो संस्करणमा पत्ता लगाईएका समस्याहरूको समाधान थपियो।
यस अवस्थामा, आईओएस ११.२.१ को अन्तिम संस्करण सबै प्रयोगकर्ताहरूका लागि र यससँगै जारी गरिएको थियो Homekit सुरक्षालाई असर गर्ने समस्याको समाधान। यसको सट्टामा प्रयोगकर्ताहरूs बेटास संस्करण ११.२.। मा एक संख्यामा छन् जुन वास्तवमै बाँकीसँग मेल खाँदैन र यो एक अनौंठो प्रक्षेपण हुन्छ। र यो यो कि एक कमजोर अपरेटिंग सिस्टमको यो संस्करणमा फेला पर्‍यो जसले स्मार्ट उपकरणहरू भएका प्रयोगकर्ताहरूलाई सीधा असर गर्‍यो र यो नयाँ संस्करणको साथ बग समाधान भयो।
एप्पलले विकासकर्ताहरूको लागि बिटा संस्करण थप्न जारी राख्दछ र बग फिक्सहरू फेला पार्दछ जारी राख्दछ, तर हालसालै यो भन्नु पर्दछ कि यी संस्करणहरूले सामान्य भन्दा बढी सुरक्षा समस्या ल्याउँछ र त्यसैले यो महत्वपूर्ण छ कि एप्पलले आधिकारिक रूपमा जारी गर्ने कुरामा ध्यान दिनुहोस्, कि हामीसँग भावना छ कि यो फर्म द्वारा धेरै नियन्त्रण बिना सुरू गरिएको छ.
अब आईओएसको लागि बीटा संस्करण ११.२.।, ११.२.१ मा रहन्छ जो प्रयोगकर्ताहरूका लागि बीटा छैन र वाचोसको लागि हामी arrive.२.२ र टिभीओएस ११.२. at मा आइपुग्छौं। यस समयमा macOS मा उपलब्ध बीटा विकासकर्ताहरूको लागि उच्च सिएरा १०.१10.13.3..XNUMX छ, र यसैले अर्को हप्ता सम्म कुनै नयाँ संस्करणहरू आउन अपेक्षित छैनन्, वा हो?
लेखको पूर्ण मार्ग: म म्याकबाट हुँ » एप्पल उत्पादनहरू » Apple Watch » वाचOSOS 4.2.2.२.२ र टिभीओएस ११.२.। को लागि नयाँ विकासकर्ता बिटा
जेफ विलियम्स भन्छन एप्पलले उत्तर अमेरिकी उत्पादकहरुमा १ ट्रिलियन डलर भन्दा बढी लगानी गर्ने छ